Saturday February 02, 2019 - 20:30:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay isaga baxday heshiiskii xadeynta gantaallada ridada dhexe ee xambaara hubka wax gumaaday ee Niyugleerka kaas oo ay horay ula gashay dowladda ruushka oo uu kala dhaxeeyo xifaaltan dhanka awoodda ah.
Donald Trump ayaa war uusoo saaray ku sheegay in uu isaga baxay heshiiskan oo mareykanka u diidaya in uu hormariyo hanaankiisa difaaca, dowladda mareykanka ayaa ruushka horay ugu eedaysay in uu si qarsoodi ah u hormariyay gantaalladiisa difaaca iyo xambaara madaxyada Hubka wax baabi'iya.
Urur NATO ayaa isna warsaxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in uu taageeray moqwqifka washington uga baxday heshiiskii farsameynta gatallada ridada dhexe, NATO waxay sheegtay in Ruushku uu daandaansi ku hayo wadamada qaaradda Yurub ee ku jira Uurka NATO islamarkaana uu sawaariikh casri ah ku rakibay xuduudaha.
dhinaca kale madaxweynaha ruushka faladamiir buutin ayaa ku dhawaaqay in uu qaadan doono tallaab lamid ah midda Donalad Trump uu qaatay, wakaaladda wararka ufaafisa ruushka ayaa sheegtay in putin uu kulan degdeg ah laqaatay wasiirrada arrimaha dibadda iyo difaaca ayna go'aamiyeen in jawaab celin laga bixiyo tallaabada uu mareykanku uga baxay heshiiskii awoodaha dhexe ee Niyugleerka.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in tartanka is hubeynta ee udhaxeeya reergalbeedka iyo ruushka uu saameyn weyn keeni karo xilli dagaalka qaboow oo dhaqaalaha ah abada dhinac udhaxeeya uu meel sare gaaray, donalad trump ayaa sanaddii lasoo dhaafay ka baxay heshiiskii xadeynta madaxyada niyugleerka ee kala dhaxeeyay ruushka.